Genesis 44 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
44 Ethubeni wayalela umphathi wendlu yakhe,+ esithi: “Zizalise iingxowa zala madoda ngokutya kangangoko zinokukuthwala uze uyibeke imali yakhe ngamnye emlonyeni wengxowa yakhe.+ 2 Kodwa uze uyibeke indebe yam, indebe yesilivere, emlonyeni wengxowa yoyena mncinane kunye nemali yokudla kwakhe okuziinkozo.” Wenza ke ngokwelizwi elo wayelithethile uYosefu.+ 3 Kwakuthi qhiphu ukusa, andululwa loo madoda,+ wona namaesile awo. 4 Aphuma esixekweni. Engekayi kude, wathi uYosefu kumphathi wendlu yakhe: “Sukuma! Sukela la madoda ude uwafumane uze uthi kuwo, ‘Kutheni nibuyekeza okulungileyo ngokubi?+ 5 Ngaba le asinto esela ngayo ize ihlabe nezihlabo+ ngayo inkosi yam? Imbi le nto niyenzileyo.’” 6 Wawafumana ke waza wawathetha la mazwi kuwo. 7 Kodwa athi kuye: “Yini na ukuba inkosi yam ithethe la mazwi? Makube lee kubakhonzi bakho ukwenza nantoni na enjengale. 8 Kaloku, imali esiyifumene emlonyeni weengxowa zethu siyibuyisele kwakuwe sisuka ezweni lakwaKanan.+ Singathini na ke, ukuba isilivere okanye igolide endlwini yenkosi yakho?+ 9 Lowo ifunyenwe kuye phakathi kwamakhoboka akho, makafe, nathi ngokwethu sibe ngamakhoboka enkosi yethu.”+ 10 Ngoko wathi: “Makube ngokwamazwi enu kanye.+ Ngoko lowo ifunyenwe kuye uya kuba likhoboka lam,+ kodwa nina noba msulwa.” 11 Ngoko bazithoba ngokukhawuleza iingxowa zabo waza ngamnye wavula ingxowa yakhe. 12 Waza wazigocagoca ngenyameko. Waqala ngoyena mkhulu waza wagqibela ngoyena mncinane. Ekugqibeleni yafunyanwa indebe engxoweni kaBhenjamin.+ 13 Ngoko bazikrazula iingubo zabo zokwaleka+ waza ngamnye wakhwelisa umthwalo wakhe e-esileni lakhe, babuyela esixekweni. 14 Basuka uYuda+ nabantakwabo baya endlwini kaYosefu, yaye wayeselapho; baza bawa phambi kwakhe emhlabeni.+ 15 Wathi uYosefu kubo: “Sisenzo sini na esi nisenzileyo? Beningazi na ukuba indoda enjengam nje ingahlaba izihlabo?”+ 16 Wadanduluka ke uYuda wathi: “Siya kuthini na enkosini yam? Siya kuthetha ntoni na? Yaye singazingqina njani na singamalungisa?+ UTHIXO oyinyaniso usifumene isiphoso samakhoboka akho.+ Yabona, singamakhoboka enkosi yam,+ thina aba kunye nalowo ifunyenwe esandleni sakhe indebe!” 17 Noko ke, wathi yena: “Makube lee kum ukwenza oku!+ Indoda efunyenwe esandleni sayo indebe, yiyo eya kuba likhoboka lam.+ Ke nina, nyukani ngoxolo niye kuyihlo.”+ 18 UYuda wasondela kuye waza wathi: “Tarhu, nkosi yam, nceda ulivumele lithethe ilizwi ikhoboka lakho ezindlebeni zenkosi yam,+ yaye mawungavuthi umsindo wakho+ ngakwikhoboka lakho, kuba ungangoFaro wena.+ 19 Inkosi yam yawabuza amakhoboka ayo, yathi, ‘Ninaye na uyihlo okanye umntakwenu?’ 20 Ngoko sathi kwinkosi yam, ‘Sinaye ubawo owalupheleyo nomntwana wasebudaleni bakhe, oyena mncinane.+ Kodwa umntakwabo wafa, ngoko nguye yedwa oseleyo kunina,+ yaye uyise uyamthanda.’ 21 Wathi ke wena kumakhoboka akho, ‘Yihlani naye nimzise kum ukuze ndimbone ngamehlo.’+ 22 Kodwa sathi kwinkosi yam, ‘Inkwenkwe leyo ayinako ukumshiya uyise. Ukuba ithe yamshiya uyise, uya kufa+ ngokuqinisekileyo.’ 23 Wathi wena kumakhoboka akho, ‘Ukuba umninawa wenu omncinane akathanga ehle nani, aniyi kubuya nibubone ubuso bam kwakhona.’+ 24 “Senyuka ke saya kwikhoboka lakho ubawo saza samxelela amazwi enkosi yam. 25 Kamva ubawo wathi, ‘Buyelani khona, niye kusithengela intwana yokutya.’+ 26 Kodwa sathi, ‘Asinakuhla. Ukuba umninawa wethu omncinane ukunye nathi, siya kuhla, kuba asinakububona ubuso bendoda leyo ukuba umninawa wethu omncinane akakho kunye nathi.’+ 27 Lathi ke ikhoboka lakho ubawo kuthi, ‘Niyazi kakuhle into yokuba umfazi wam wandizalela oonyana ababini.+ 28 Kamva omnye ndaphulukana naye ndaza ndadanduluka ndathi: “Owu, umele ukuba ngokuqinisekileyo uqwengiwe!”+ yaye andikamboni nangoku. 29 Ukuba ningamthabatha naye lo, ndingamboni, aze ahlelwe yingozi ebulalayo, ngokuqinisekileyo ke ngoko nozihlisela izimvi zam eShiyol+ ndisentlungwini.’ 30 “Ngoko ke, ukuba ndithe ndafika kwikhoboka lakho ubawo, inkwenkwe ingekho kunye nathi, njengoko umphefumlo wakhe ubotshiwe nomphefumlo wayo,+ 31 uya kuthi ngokuqinisekileyo akubona nje ukuba inkwenkwe ayikho, asuke afe, yaye amakhoboka akho aya kuba ngenene azihlisele eShiyol izimvi zekhoboka lakho ubawo, esentlungwini. 32 Kuba ikhoboka lakho layimela+ inkwenkwe leyo ekumkeni kwayo kuyise, lisithi, ‘Ukuba andithanga ndimbuyisele kuwe, ndoba netyala kubawo ngonaphakade.’+ 33 Ngoko ke, khawuncede, ulivumele ikhoboka lakho lihlale esikhundleni senkwenkwe leyo njengekhoboka lenkosi yam, ukuze yona ihambe nabantakwayo.+ 34 Ngokuba ndingathini na ukunyuka ndiye kubawo, ngaphandle kwale nkwenkwe, kuba hleze ndiyibone intlekele eya kumehlela ubawo?”+